Vaovao - Vahaolana fandrefesana rivotra indostrialy
Vahaolana fandrefesana rivotra indostrialy
Ny orinasa dia tsy superposition tsotra amin'ny sampan-draharahan'ny famokarana sy ny fanodinana amin'ny foto-kevitra nentim-paharazana, fa faritra feno ao anatin'izany ny fitantanana, R & D, famokarana, fitahirizana, lozisialy, fandraisana, birao, trano fisakafoanana, lozisialy, parking ary toerana hafa. Noho izany, avo kokoa ny fikorianan'ny rivotra sy ny fitakiana fampiononana, ka maro ny orinasa sy ny atrikasa fanadiovana no hampiasa rivotra indostrialy indostrialy, mba hamahana ireo olana ireo ary hampitombo ny fahombiazan'ny asa.
Feno vovoka sy bakteria ny tontolo iainantsika. Ireo zavamiaina bitika ireo koa dia manana fepetra avo lenta amin'ny tontolo iainana. Any amin'ny ivon-toeram-pikarohana mikraoba maro, ny rafitra fanadiovana ny rivotra indostrialy indostrialy dia tian'ny mpikaroka. Eny rehetra eny ireo microorganisms ireo. Mety tsy mahatsapa na inona na inona isika amin'ny fotoana mahazatra, fa rehefa voan'ny aretina na fanaintainana ny vatantsika, dia mety ho faty ny bakteria eny amin'ny rivotra. Na izany aza, misy zavatra maro izay tsy azo atao raha tsy amin'ny toe-javatra tsy misy vovoka sy aseptika. Ohatra, ny tetik'asa fanadiovana dia mila mametraka rivotra fanadiovana amin'ny ambaratonga mihoatra ny 10000.
1. Vahaolana afovoan-drivotra atrikasa ao amin'ny orinasa: vondrona centrifugal avo lenta + unit coil fan
2. Tombontsoa amin'ny atrikasa atrikasa afovoan-drivotra vahaolana:
1. Koa satria ny zavamaniry dia manana fepetra avo lenta amin'ny fahafahan'ny vata fampangatsiahana, ny fiarovana, ny fahamendrehana ary ny fahombiazan'ny angovo, dia soso-kevitra ny hifidy vondrona centrifugal avo lenta na chiller visy;
2. Any amin'ny orinasa lehibe sy ny atrikasa, very haingana ny fahafahan'ny fampangatsiahana, ary lafo be ny vidin'ny fandidiana. Aroso ny mifidy ny rano mangatsiatsiaka amin'ny vidiny fandidiana ambany.
3. Ny fepetra tokony hofenoina amin'ny vahaolana amin'ny famokarana rivotra afovoany:
1. Ny vondrona centrifugal dia mandrakotra faritra midadasika ary mila manomana tontolo malalaka ho an'ny fametrahana.
2. Ny orinasa dia tokony hanome toerana iray hametrahana kabinetra mangatsiaka rano, ary tsy maintsy misy toerana ampy ho an'ny fiverenan'ny rivotra, ary ny toerana misy ny valindrihana amin'ny fantsona mangatsiaka.
Fotoana fandefasana: Aug-02-2021